AMPELANTANANTSIKA NY FANDRESENA – MyDago.com aime Madagascar
AMPELANTANANTSIKA NY FANDRESENA
Tsy mbola afapo tamin’ny voka-pifidianana tany amin’ny faritra Alaotra misy anay iny izahay hoy ny Ct Brenda androany teny amin’ny magro Behoririka. Ny antony hoy izy dia nisy tsy voahenjikay tany ambanivohitra tany fa aza matahotra ianareo fa hiparitaka izahay, haneho,ny tanjakay. Aza manaiky horebireben’ny olona hoy izy fa ataontsika am-pilaminana ary tsy maintsy ampitombointsika ny « pourcentage ». Ny ben’ny tanànan’ny Mananara Avaratra dia nilaza fambola I dada bno nahavita zavatra teto Madagasikara. Tsy sahy nanao fampielezankevitra izahay ben’ny tanàna 17 tany hoy izy satria trandrahan’ny sasany ny harempirenena, ny dahalo manjaka tanteraka, ka aleonay nidinika tsara fa eto dia vitany io pourcentage io fa tsy maintsy mahazo Robinson. Ny Ct Horace kosa dia nilaza fa tokana ny tanjona dia Madagasikara miaina ao anaty mamirampiratra, eo am- pelantanantsika hoy izy ny fandresena , mba hahazoantsika mitotorebika dia mbola manana adidy isika. Ny Ct Raveloson Constant dia nilaza fa ny kisambotrambotra dia isika efa nanapankevitra handresy amin’ny fifidianana fa tsy aty amintsika ny ilana izany korontana izany ary fantatry ny ankilany izany herimpanahy izany. Misy lafiny hafa hoy izy io fa naheno tsaho ny tenako tao anatin’ny telo andro fa hosamborina ihany koa ny tenako. Ireto hoy izy ny fampitandremana tiako atao, ny zavadehibe ilana fitandremanana dia ilay fanapepoana , matoa sahin’ny olona samborina I rabe na rakoto dia satria eritreretiny fa tsy hiaro azy ireny namany ireny. Ampitovio hoy izy ny anaran’ny olona hoe samborina sy ny any amin’ny boriborintany any satria ranona tsy antoko avy amin’ny ranona. Raha ny anaran’ny antoko no ifampitsahoana dia tsy mety izany ka sami amieritreritra isika. Momba ny lisi-pifidianana dia namafiny fa niaiky ny Ceni-T fa misy tsy mety ny nataony na dia menamenatra azy izy ireo dia efa manarina izany , koa araraoty ny fisoratana anarana , aza misalasala fa taomy ny namana very zo. Efa nivoaka vonjimaika hoy izy ny voka-pifidianana fa ana iray hetsy azan y anay any amin’ny Ces dia tsy maintsy atao ny fihodinanan faharoa. Ny olona hoy izy dia tsy azon’ireo baikona hoe ato indray ianao mandrotsaka fa efa hitan’ny olona ny làlantsara. Samia manazava izany isika fa aza misalasala amin’ny tee-shirt hanaovan’nny olona fa efa hita izao ny mampandroso. Noho izany dia mandrosoa amin’ny lalindalina kokoa fa efa hitantsika ny heo aiza ny misy ny trondro. Ny Cst Login Fanatera dia nanambara fa misy antony ny voka-pifidianana ratsy tany amin’iny faritra Androy iny. Ry zareo hoy izy no nanao ny fanoratana ny anaran’ny mpifidy ka navadimbadiny izany ka lasa any amin’ny fokontany hafa ny anarana’ny olona izay fantany fa zanak’I dada. Betsaka ny tsy nifidy hoy izy satria matahotra ny olona noho ny asa dahaloka nanararaotra ny sasany amin’ny fangalarabato. Tsy nisy solontenan’ny mpitarika ny movansy Ravalomanana hoy Login tany Androy. Na izany aaza anefa hoy izy dia nanao ihany izahay fa hohatsaraintsika izay, noho izany dia miangavy ny movansy Ravalomanana ny tenako ho tonga any fa nalahelo izy ireo, tsy nisy delegue de vote ihany koa tany Androy ka nofenoin’ny sasany fotsiny. Ny Ct Hilarion izay nosamborin’ny zandary natao famotorana ny Alakalmisy teo dia efa nivoaka ka tonga teny ankianja. Nisaotra ny vahoaka Malagasy, ny movansy Ravalomanana, ny mpitandro ny filaminana, ny mpitsara ny tenany teny an-toerana. Ny antony nisamborana ahy hoy izy dia noho ny kabary izay nataoko teto ny Alarobia fa misy manely tsaho hoe nangalatra fiara.Rahalahiko daholo ny Ceni-t sy ny Ces hoy izy manomboka izao. Amin’ny Talata izao amin’ny 1ora ny fitsarana azy eny amin’ny fitsarana Anosy.
MANANDAFY RAKOTONIRINA : Ny fandresena vazaha dia ny fandresin’i Neny
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 novembre 2013 9 novembre 2013 Catégories Politique
5 pensées sur “AMPELANTANANTSIKA NY FANDRESENA”
Arabaina dia misaotra an’andriamanitra aloha fa tafavoaka Tompoko.
Enga anie ianao ka tsy hanaraka ireo rehetra tsy nahari-boakena rehetra ireny.
Mba azo lazaina ve sa vita2 ho azy fotsiny hoe: « Menatra2 ny Cenit t@ tsy nahalavorary ny karam-pifidianana »
ny antony tsy nahatomombana ilay karam-pifidianana???
Mora2-ina be anie izy izany e!
o ranavalona an: la maladie d’amour indray anie no hirahirain’ilay Amiral Jamba vao hitanay teo ê!
Raha ny lahatsoratra no resahina dia marina io hoe Mora2-ina.
Fa manomboka eto dia ataoko fa resy lahatra daholo
fa antsika légaliste ny fandresena atsy ho atsy!
Mila stratégie avo lenta,
ary mino aho fa efa mikaon-doha (brainstorming) ny membra ao @ ankolafy
sy ny andaniny antoko Avana
Fa ianareo eo ireo aloha dia efa mihezaka manatsara ny fampitanareo vaovao hazava sy mitombina ary dia efa manomana @ fanolorana PROGRAMAN’ASA afaka mampivoatra ny fiainan’ny tsirairay any @ faritra misy azy avy!
Nahoana moa no tsy hanao tamberina ny zava-nisy ka nanabotry ny firenena.
(tsy hitan’ny any @ faritra taratra loatra izany ny fahavoazam-be,
aiza moa koa fa ny Radio sy TV nationaly dia eo am-pelatanan’ny mpanongana
ary gravy ihany koa fa lasa OISIFS ny ankamaroany
dia ireny voatarik’i Camille ireny)
afaka 20andro anie dia hanomboka ny propagandy!
Aza dė mapmė moa ry sė a!!fa maninona indray hono???
Misy zavatra kotrehin’ireo matoa ireo mody MALEFA-DEFAKA ireo an!!
mety ho fanaronana ity valim-pifidianana fôpla ity??dia mody mba mifitsa-pitsaka daholo dia
MIKOPAKOPAKA elatra indray izy fa NAHAVOA e!!!tokony ho 1 er tour mantsy ilay izy raha ny
ny tena marina.
» ISIKA ANIE MANDEFITRA FOANA » hoy ilay iraikalahy izay rehefa avy mivarotra saka be loha
@ vahoakan’i Magro izy.
DIA ANKEHITRINY DIA MIANDRY NY DIDI – PITSARANA NATAON’NY MALAGASY TAMIN’NY 25 OCTOBRE TEO…
11 novembre 2013 à 19 h 21 min
Sendra naheno ny kabarin’ingahy Hilarion za fa toa HAFAHAFA an??????
toa misolelaka hafahafa izany ary dia mahasahy mihizingizina izy fa RAHALAHINY ARY TOA
LELAFINY MIHINTSY IRETO CENIT SY CES ARY INDRINDRA FA I KOTOVELO IZAY EFA FANTATRA FA
RAJAKOM-POZA EFA HATRY NY ELA????
Ny zavatra tsikaritra matsy di nahazo olona be izy io tao FIANARANTSOA t@ fanaovana fampielezan-kebitra
raha vao lasa i NENY fa maty moa i bėbė Razay t@’izay, ka eto no MIPETRAKA NY FANAIKO RAY OLONA
HOE: VOAVIDY KOA VE I HILARION?????MISY TSY MAZAVA SADY HAINGANA BE LOATRA, ohatry ny
hoe: avy dia nanaiky angaha Ingahy fa tonga dia i Mamy Rakotoarivelo no ……???. TSY MAZAVA2 loatra????
Ny ahiahy tsy hiavanana tompoko, ary fara-doboka io ka harao akaiky ihany ry ZAREO FA SAO KENDA VO
HOE DOMY AHO RANAOTRA IO TSY HIVERINA INTSONY FA FARANY IO FOFIDIANANA IO AN!!!
Aza variana isika fa toy izao no nataon’i Ralaiseheno hoe: » ny baikon’ny mpitarika no narahany » dia iny izy LASA
tany @ FOZA INY .Dia ity tonga dia hoe koa : notsindriany tsara ireo MPISOLOKY MPAMADIKA FA NAMANY RALAHINY
dia i Mamy Rakotoarivelo koa notsindriny .
Précédent Article précédent : ALEO HAZAVA NY SAFIDIM-BAHOAKA
Suivant Article suivant : Neny sy Dr Robinson : niara-niombom-bavaka tao amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy androany